Isamba Eshibhile Esiphathekayo se-Co2 Fractional Laser Vaginal Tightening Scar Mole Skin Rejuvenation Machine Suppliers and Factory | IVTEX IQEMBU
Inhloko yokuskena ehlakaniphile, ukusebenza kalula nokonga isikhathi.
Amakhanda ahlinzwayo asetshenziselwa ukusika umaki wesikhumba nezipikili ezingenile, i-compound nevus ne-intradermal nevus njll.
Amakhanda we-Gynecology1, 360 ° kanye no-90 ° ukwelashwa, i-Laser Plated vertebral body laser ine-reflectivity ephezulu futhi inomphumela omuhle wokwelapha.
Amakhanda we-Gynecology2, ukwelashwa kwe-vulva labia, ukususwa kweLabia mhlophe ukususwa kwe-Melanin.
Ipulaki ye-Aviation ngaphandle isebenzisa ingxubevange yensimbi esezingeni eliphakeme, izikhonkwane ze-solder zegolide ezingama-24 ngaphakathi.Kwenza isixhumanisi sithembeke futhi siqine, xhumana nokuzinza. Ukuzinza nekhwalithi yemishini kuthuthukiswe kakhulu.Inezela ikepisi elingenaluthuli ukufeza umsebenzi wokufakazela uthuli nokulwa nezinto ezingasebenzi. Kubukeka kukuhle futhi kungakhethwa imibala eyahlukahlukene (okumhlophe okusansundu, obomvu nokuhlaza okwesibhakabhaka).
I-Laser emitter: I-Laser ingeniswe isuka e-USA, Amandla wokukhipha makhulu kune-40W, Impilo yesevisi: amahora we-2000.
Ubakaki omusha we-dimmer ungafiphazwa ngaphandle kokuqaqa umshini
Ingalo ehlangene engu-7 ehlangene, engu-360 • isebenza ngokukhululeka, inciphisa kakhulu ukulahleka kwamandla
Imiphumela emithathu ye-laser kwizicubu:
1. Umphumela we-Photothermal:
Umphumela we-photothermal uhlukaniswe waba nomphumela oshisayo, ukuqinisa ukushisa nokukhipha ukushisa okushisayo. Umphumela wokushisa: Lapho izinga lokushisa likhuphukela ezingeni elithile elicishe libe ngama-60 ℃ -65 ℃, imicu ye-collagen ingancipha iye ku-1/3 wobude bokuqala kanye nobubanzi be-collagen buyanda, futhi ubuqotho besakhiwo sezicubu ezihambisanayo abuthinteki; i-coagulation eshisayo: lapho izinga lokushisa liphakeme kuno-75 ℃, futhi nesikhathi siside ngokwanele, kuzodala ukujiya okushisayo kwezicubu, futhi inani elithile le-coagulation eshisayo elihlakazekile lizoletha umphumela wokwakha isikhumba ohlala njalo futhi osobala; ukufudumeza okushisayo: Lapho izinga lokushisa likhulu kune-300 ℃ nesikhathi sanele, ukushisa Kubangela ukuphefumula kwezicubu, ukushisa, ukuqhekeka kwamangqamuzana nokwakheka kwe-plasma, okuholela ekuhlukumezeni kwezicubu.
2. Impendulo ye-Photodynamic
Indlela ukukhanya okukhanyisa ngayo izicubu, kubangele eyodwa noma uchungechunge lokuhlangana kwamakhemikhali ezicutshini okwenza ingxenye enesifo (izicubu eziqondiwe) iphathwe noma ithuthukiswe ngempumelelo.
3. Ukukhuthaza ukukhanya
Isikrini se-LCD Isikrini sokuthinta umbala esingu-10.4 intshi
Amandla wokukhipha 40W
Umthombo we-Laser Ishubhu ye-RF
Imodi yokukhipha ye-Laser Ishayela Super, CW, ishayela olulodwa, ishayela okuphindaphindiwe
Imodi yokusebenza I-Fractional, evamile, i-gynae, imodi ye-vulvae
Iskena imodi Ukuhleleka, ukungahleleki, iphutha elingalungile
Iskena indawo 0.1 * 2.6mm-20 * 20mm
Spot ibanga 0.1-2.6mm (eguquguqukayo)
Isikhathi se-Pulse 0.1-10ms
Iskena ubujamo Ulayini, isikwele, unxande, unxantathu, iheksagoni, indilinga ne-oval
Impilo yomthombo we-Laser Ingalo ehlanganisiwe engu-7 yokuqhuba i-laser
Impilo yomthombo we-Laser Amahora angama-20000
Ubukhulu bomshini 80 * 60 * 29cm ngaphandle kwengalo echaziwe
Iphakheji ejwayelekile Aluminium ingxubevange ibhokisi
Isisindo esikhulu 34kg
Langaphambilini I-Fractional Co2 Laser Vaginal Tightening Laser Medical Co2 Laser Acne Scar Ukususa Umshini
Olandelayo: Umshini Wokuqinisa I-Laser Co2 Laser
Umshini we-Laser ohamba phambili we-Co2
I-Co2 Laser Fractionional 60w
Izinsiza kusebenza ze-Co2 Laser Fractional Beauty
I-Fractional Co2 Laser Medical
I-Laser Yokuvuselela I-Co2
Umshini we-Laser Fractional Co2